Barxadda Salonist Spa iyo Salon Platform: Balanqaadyada, Tirinta, Suuqgeynta, Mushahar bixinta, iyo Inbadan | Martech Zone
Saloniste waa barnaamij saloon oo ka caawiya HBS iyo Saloonnada maareynta mushahar bixinta, biilasha, kaqeybgalinta macaamiishaada, iyo fulinta xeeladaha suuqgeynta. Astaamaha waxaa ka mid ah:
Jadwalka Balanta Spas iyo Salon
Jaaleynta khadka tooska ah - Adoo adeegsanaya softiweerka ballansashada ee casriga ah ee 'Salonist Online', macaamiishaadu waxay jadwal sameyn karaan, dib u dhigan karaan, ama ka noqon karaan ballamaha meel kasta oo ay joogaan. Waxaan leenahay labadaba degel iyo karti adeeg oo lagu dhex biirin karo maareynta warbaahinta bulshada ee Facebook iyo Instagram. Tan, habka ballansashada guud ahaan waa iswada. Majiraan laba jibbaar. Nabadeey no-show with Salonist.
Afyareyaasha Afyare - Jooji luminta waqtiga shaqaalaha iyo macaamiisha adoo siinaya jadwal waqtiga aan la heli karin kaalandarkaaga. Iyada oo xayiraadaha booska loogu talagalay ballansashada khadka tooska ah, waxaad awood u leedahay inaad muujiso oo keliya boosaska la heli karo, oo xaddidaya ballansashada ballaadhan ee waqti cayiman gudahood.
Boos celinta saacadaha ka baxsan - Sii macaamiishaada dabacsanaan badan si ay u ballamaan ballamaha, xitaa saacadaha shaqada ka baxsan, adoo adeegsanaya softiweerka maareynta. Iyada oo leh barnaamijka ugu fiican ee saloon, meheraddaadu way sii socon kartaa xitaa haddii aad ka baxsan tahay. Salonist ayaa loogu talagalay inuu macmiilkaagu ku sii wado soo gelitaanka joogtada ah, halka ay si habboon u ballansadaan wakhti kasta iyo meel kasta oo ay joogaan.
Xirmada Xirmada - Ku raaxayso xorriyadda aad u abuuri karto xirmooyinka adeegyo kala duwan xirmooyin ku habboon. Barnaamijkan maareynta macmiilka, waxaad ku kordhin kartaa iibka iyo dakhliga istuudiyahaaga adoo u fududeynaya macaamiisha inay dhigaan jaale ku saleysan dookhooda. Softwareka Salonist salon sidoo kale wuxuu ufiican yahay kordhinta daacadnimada macaamiishaada oo leh xirmooyin saloon aan kala go 'lahayn oo ku yaal faraha.
Jaaleynta xubinnimada - Sii macaamiishaada dhiirigelin ay ku sii ahaadaan kuwo daacad ah adoo adeegsanaya habka ballansashada xubinnimada iyo jadwalka xubinnimada. On Salonist, milkiilayaasha saloonku waxay wadi karaan barnaamij daacadnimo ah oo xubnaha ka siinaya qiimo dhimis adeegyada gaarka ah. Tan waxaa lagu caddeeyay inay horseedayso koritaanka saloon iyo kordhinta heerka sii-haynta macaamiisha.
Aqbal Lacag bixinta - Sidee wacdaro u noqon laheyd in la helo softiweerka ugu fiican ee ka dhigaya aqbalida lacag bixinta neecaw? Saloniste wuxuu la yimaadaa mashiinka ballansashada khadka tooska ah ee internetka ee kuxiran Paypal, Stripe, iyo Authorize.Net. Milkiilayaasha Salon waxay ku heli karaan lacag bixinta adeegyadaada iyaga oo si fudud ula jaan qaadaya wax iibsiga wijigan ku jira barnaamijkeena maaraynta salonka. Waxaad sidoo kale ku aqbali kartaa dhammaan noocyada lacag bixinta bartayada iibka ee isku dhafan.
Suuqgeynta Spas iyo Salons
Email Marketing – Send anniversary greetings, membership plans, and appointment confirmations in less than five minutes using Salonist’s email marketing services. Email marketing is a great way to increase appointments for your salon and spa services. Salonist is all about improving customer retention rates and generating higher revenue for your company.
Maareynta Dib u eegista - Faallooyinku waa hab fantastik ah oo adduunka loo tuso inaad wax si sax ah u qabanayso. Waxay kaa caawineysaa inaad aaminto macaamiil badan inta aad daacad ka dhigeyso. Jadwalka Jadwalka Balanta Salonist wuxuu kuu sahlayaa inaad ka hesho jawaab celin-waqtiga dhabta ah macaamiishaada ee ku saabsan alaabadaada iyo adeegyadaada. Dardargalinta lagu diro SMS-ka iyo emaylka taleefannadooda casriga ah ee loogu talagalay maaraynta macmiilka saxda ah, waxaad kula xiriiri kartaa macaamiishaada.
Maareynta Kuubanka - Haddii ay jirto hal shay oo macaamiishu jecel yihiin, waa adeegyo bilaash ah. Ku abaalmari macaamiishaada masruufkooda qiimo dhimis iyo kuuboon ku siiso dhammaan amarrada cusboonaysiinta. Ma jiro nidaam kakan oo ku lug leh. Waxaad ku maamuli kartaa midigta tabka 'Generate Salon' iyo 'Spa Discount Coupons' ee ku saabsan barnaamijka casriga ee casriga ah. Ka ilaali macaamiishaadu inay soo galaan qiimo jaban.
Gift Cards - Macaamiishaada fursad u si ay kuwa aad jeceshahay ugu hibeeyaan howlahaaga munaasabadaha gaarka ah. Hadday tahay sannad-guurad ama dabaal-deg dhalasho, kaar hadiyadeed oo shaqsiyeed oo ku yaal Salonist ayaa kaa caawin kara inaad la hawlgasho macaamiisha mustaqbalka. Barxadda isla markiiba waxay ku ogeysiisaa emayl ama SMS.
Nidaamka Daacadnimada - Barnaamijyada daacadnimada ee loo maro maareynta macmiilka ayaa ah nidaam kale oo abaalmarin weyn u ah macaamiishaada. Tani waxay gacan ka geysan doontaa hagaajinta soo noqnoqoshada booqashooyinkooda. Ka hubi softiweerka Salonist si aad ugu fududaato helitaanka barnaamijyada daacadnimada ah ee si dhakhso leh u kobcin doona gudbinta macaamiishaada, kaqeybgalka, iyo amniga.
Ololayaasha SMS - Iska yaree suurtagalnimada in aanad soo bandhigin macaamiishaada. Salonist wuxuu kaa caawinayaa inaad laxiriirto iyaga iyada oo loo marayo xusuusinta ballanta, kaqeybgalka macaamiisha, ololeyaasha xayeysiinta, iyo waxyaabo kaloo badan. Ku kobci meheraddaada saloon adigoo dhex galaya wadahadalka macaamiishaada oo aad si dhab ah u ogtahay waxa ay doonayaan.
Marka lagu daro dejinta iyo suuqgeynta, Saloniste sidoo kale waxaa ka mid ah maareynta macaamiisha, ballamaha horay loo sii siiyay, maareynta alaabada, maareynta kharashka, maareynta goobta, dukaanka internetka, falanqaynta, barta iibka, dalabka moobiilka, foomamka internetka, iyo warbixinno faahfaahsan. Barnaamijkan saloon waxaa lagu rakibay wax walboo aad ubaahantahay si aad uquruujiso dakhliga, waqtiga u ilaaliso, kor ugu qaaddo muuqaalka sumadaha, iyo inaad go'aano caqli gal ah ka gaarto warshadaha qurxinta. Baadh astaamaha qalabkan aadka loo jecel yahay una diyaar garow inaad ganacsigaaga ka dhigto mid hagaagsan.
Macaamiishooda waxaa ka mid ah timo jare, timo qurxin, daaweeyeyaal duugis ah, meelaha lagu qurxiyo cidiyaha, isboortiga, meelaha lagu qurxiyo caruusadaha, softiweerrada isboortiga ee caafimaadka, daryeelka maqaarka ee bilicsanaanta, farshaxanada farshaxanka ah, kireystayaasha guryaha lagu qurxiyo, meelaha lagu qurxiyo maqaarka, iyo kuwa xayawaanka lagu xanaaneeyo.
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Saloniste.
Tags: daryeelka maqaarka bilicsanaantaAnalyticsdejinta ballantatimo jarekireystayaasha waababkaqurxinta aroosyadamaaraynta macaamiishamaaraynta kharashkaqolalka timahamaareynta alaabadamaaraynta goobtadaaweynta duugistasoftware spa spacodsiga mobileSaldhigyada ciddiyahafoomamka onlaynka ahdukaanka onlinexayawaanka xayawaanka lagu xanaaneeyodhibic iib ahPOSballamaha hore loo sii qaataysuuqgeynta saloondaawooyinkaqurxinta dharka maqaarkafarshaxannada tattoo
Influ2: Suuq Ku-saleysan Xisaab-Ku-saleysan Qofka (ABM) Madal Xayeysiin ah